Qeybinta qaybinta qeeybta ah ee lagu qaato tababbarka sahayda waxbarashada saacadaha wakhti-yar
Warehouse iyo qaybinta
Waxaan ku maamulnaa qalbiga iyo nafta
Waxaad baraneysaa sidii aad si haboon u maareyn lahayd helitaanka iyo diiwaangelinta alaabta, xireyso iyo ku xirto iyaga oo diyaarinaya maraakiibta.
Waxaad ku dhaqmaan uruuriyo, urur bakhaar, maamulka goobta iyo wadada oo ay bartaan aad loading iyo dejinta dhowr baabuur.
Isgaarsiinta xirfadaha jilicsan hareeraha si uu macaamiisha sidoo kale iska leh in aad xirmo.
Waxaad tahay saaxiibtinimo
Waxaad tahay wakhti iyo habsami
Tababarka Warehouse & Qaybinta qaadataa celcelis ahaan labo ilaa shan sano.
Waayo, Warehouse tababarka & Qaybinta Waxaad u baahan tahay ma aqoon gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, waa in aad soo gudbiso shahaadada caafimaadka ee tababarkan.
Haddii warehouseman aad ku lug leedahay silsiladda sahayda oo dhan. Waxaad furfurmi waxaa loogu talagalay dhammaan howlaha bakhaarka.
Belgium sii kordhaysa waa madal logistics ah. Port ee Antwerp sii wadaan in ay koraan oo waa loo shaqeeyaha weyn. Sidaas daraaddeed aad sida warehouseman fursad aad u fiican si aad u hesho in ay ka shaqeeyaan.
Muxuu karayaa mudnaan?
Ka dib markii Warehouse tababarka & Qaybinta noqon kartaa xarunta kale raaci tababar dheeraad ah si ay Qofta, qorsheeyaha gaadiidka.
Maamulka logistics tababar waafaqsan barnaamijkan.